Madaxweynaha cagta ha loo dhigo! W/Q Bishar Haji | RBC Radio
Madaxweynaha cagta ha loo dhigo! W/Q Bishar Haji
Posted on February 28, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Madaxweynaha cagta ha loo dhigo!
Taageerayaasha: waxaan dhihi lahaa, ka yareeya amaanta iyo buunbuuninta faraha badan. Farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed oo la doortay, wax halala qabto oo ha loo duceeyo, laakiin yaan karkaarka la weydaarinin, waxuusan ahayna yaan laga dhigin, sababtoo ah weli lama arag wax qabadkiisa.
Mida kale amaanta ka badbadinta ah waxay keeni kartaa in madaxweynaha mucaarad yeesho, amaba si fudud loo naco. Waxaana ugu wacan dabeecadda bani aadamka ayaaba ka sameysan inay karaahsato wax kastoo laga badbadiyo. Tusaale cunnada hadii lagaa badiyo waad soo hunqaaci.
Madaxweynaha laftirkiisa buunbuunita badan waxay u keenin kartaa culeys iyo
jahawareer siyaasadeed. Marka uu dhexda u galo caqabado waaweyn oo u baahan jiljileec iyo xeeladeysi si looga gudbo iyo taageerayaal xamaasadeysan oo aan ogoleyn in fariinka la qabto, baabuurkana boqol lagu wado madaxweynaha sow ma noqonayo sida Owr Owr wado, oo ma jibaaxinayo jiqda. Sow ma qaadan karo go’aano aan laga fiirsan ama is muujin ah, cadaasiska iyo durbaanka lagu dabawato darti, tallaabooyinkaas sow wax uma dhimi karaan danaha qaranka, ileen waxaa lagu qaatay si ka fiirsi la’aan ah?. Waxaa kaloo suurta gal ah in uu ka qaado isla weynan aanay soomaalida xilligan aqbali karin. Sidoo kale beesha caalamka oo ay wax badan inooga xiran yihiin hadaan soomaali nahay.
Isbedel buu keenay, Sacuudiga ayuu booqday:
Dhanka kale aniga ma aqaan meesha laga keenay arinkan la leeyahay madaxweyne Farmaajo waxuu khilaafay madaxdii ka horeysay oo booqashada ugu horeysa marka la doorto ka bilaabi jiray dalka Ethiopia? Madaxweyne Xassan safarkii ugu horeeyay waxuu ka bilaabay dalka Uganda, magaalada Kampala oo uu kaga qeyb galay xuska sanadguradii 50 aad ee ka soo wareegtay marki uu xorriyadda qaatay dalkaas.
Halkan ka daawo safarkii ugu horeeyay madaxweyne Hassan,-Fadlan videoga dhameyso qeyba dambe ayay ku caddahay suaasha aaad qabto
Sheekh Shariif waxaa lagu doortay Jabuuti, ciidi ugu horeysay ee uu cagta dhigay asaga oo madaxweyne Soomaaliyeed ahana waxay ahayd ciida Jabuuti, Inti la doortay ka dib, muddo ayuu ku noolaa dalka Jabuuti, oo uu qorsheynayay sida uu ku soo geli lahaa dalka. Marki uu dalka Yimidna safarki ugu horeeyay waxuu ka bilaabay dalka Jabuuti.
Cabdullaahi Yuusuf waxaa lagu doortay dalka Kenya- eldoret, muddo ayuu dalka Kenya ku sugnaa asaga oo madaxweyne Soomaaliyeed ah.
Sidoo kale Cabdulqaasim waxaa lagu doortay Jabuuti, Ethiopiana xiriir kama dhexeynin.
Marka, aaway madaxweynaha Farmaajo ka horeeyay ee cagta dhigay ciida Ethiopia, asaga oon soo marin dal kale oo shisheeye? ma Kenya iyo Jabuutibaa Jamhuuriyadda lagu daray, mise Jaale Siyaad baa Ethiopia booqday marki uu xukunka qabsaday?
Hadaan wax yar is dultaagno safarka madaxweynaha ee dalka Sacuudiga, anaga oon wax xumaan ah ka wadin, madaxweynaheena la doortayna aaminsan, hadana waxaan dhihi karnaa safarkiisa waxuu ka bilaabay dal soomaalida aad loogu bahdilo, markii dhibka nagu dhacayna dhib mooyee aan wax axsaan ah noo sameynin, mararka qaarna la sheego inuuba ka baqdin qabo in qaranimadi Soomaaliyaa soo noqoto, oo markaas la soo saaro shidaalka Soomaaliya, arinkaasoo wax u dhimi kara dhaqaalihiisa.
Waa dal bilo ka hor inta lacag laaluush ah bixiyay loo dhoofiyay gabdha soomaaliyeed oo qaali ah, kuwaasoo Sacuudiga doonayo in uu ka dhigto jaariyado/adoomo la leeyahay oo u shaqeeya dumarka Sacuudiyaanka ah.
Waxaa soo dhan iyadoy jiraan hadana Farmaajo anaga oo soomaali ah yaa dooranay, waa madaxweynaheena, waanan ku kalsoonahay, aan la shaqeyno aanan u duceyno, balse hadana yaan laga dhigin malag samada laga soo diray , ileen weli wax shaqa ah inooma qabanin.
War cagta ha loo dhigo.
Waxaa qoray Bishar Haji